एसईईपछि कुन बिषय रोज्ने ? - Sainokhabar
होमपेज / विचार / एसईईपछि कुन बिषय रोज्ने ?
एसईईपछि कुन बिषय रोज्ने ?
यसपालिको एसईई परीक्षा सकिइसकेको छ । विद्यार्थीहरुका लागि एसईई पछिको समय फुर्सदको समय हो, नै तर यो समय भविष्यको योजना बुन्ने र गन्तव्य तय गर्ने समय पनि ह।े । परीक्षा दिएपछि नतिजा नआउन्जेलसम्म विद्यार्थीहरुले आफ्नो उच्च शिक्षाका बारेमा निर्णय गर्नेमात्र होइन, त्यसका लागि आवश्यक तयारी पनि गरिसक्नुपर्छ । कहाँ अध्ययन गर्ने ? कुन बिषय लिएर अध्ययन गर्ने ? र उक्त बिषय लिएर अध्ययन गरिसकेपछि भविष्यमा के गर्ने ? भन्ने विषयमा विद्यार्थीहरु जानकार हुनैपर्छ ।
‘आइरन गेट’ मानिने यसको जाँचपछि केही लामो विदाको उपभोग गर्छन भने कसैले त्यतिकै बिताउँछन् । कतिले खाली समय सदुपयोग होस् भन्दै ब्रिजकोर्स पनि गरिरहेका हुन्छन् त कतिपयले कम्प्युटर सिक्छन् । विदाको समयमा बरालिँदा पढ्ने बानीनै हराउने हुनाले आफ्नो जीवनको लक्ष्यबारे तयारी गर्न यो उपयुक्त समय हो । अहिले अधिकांश कलेज खोज्नेदेखि कुन बिषय पढ्ने भन्नेसम्मको चिन्ता छ । उनीहरु अब के पढ्ने, कुन बिषय पढ्ने, कहाँ पढ्ने भन्ने बिषयमा घोत्लिन थालेका छन् । पढ्न जाने कलेज कस्तो होला भन्नेमा उनीहरुमा ज्यादा उत्सुकता देखिन्छ । कतिपयले त यो बिषयनै पढ्ने भनेर तयारी पनि थालिसकेका छन् । विद्यार्थीहरुले यो खाली समयमा पनि पढाइमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । करिअर विकास गर्ने उमेर भएकाले कलेज छान्दा ध्यान दिनुपर्छ । त्यहाँको वातावरण, बिषय परिणाम, ल्याबजस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले गाउँ÷सहरतिर एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक परामर्श दिन विभिन्न संघ–संस्था खुलेका हुन्छन् ।
अब सरकारले एसईई यसरी सञ्चालन गर्ने